Topnepalnews.com | सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच अनौठो घटना,सत्तापक्षको दम्भ कि प्रतिपक्षको घुर्की ?
सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच अनौठो घटना,सत्तापक्षको दम्भ कि प्रतिपक्षको घुर्की ?
Posted on: August 03, 2018 | views: 1819
काठमाडौं । संघीय संसदअन्तर्गतको बिहीबार बसेको प्रतिनिधी सभाको बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच अनौठो घटना देखा पर्‍यो । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई प्रश्न गर्न नपाएको भन्दै झोक्किएका प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सांसदहरूले चालू अवस्थामा रहेको बैठक बहिस्कार गरेर बाहिरिए । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।
संसद बैठकको शुन्य र विशेष समयमा सांसदहरुले उठाएका विभिन्न प्रश्नहरुको सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री बादलले जवाफ दिए ।
गृहमन्त्री बादलले कञ्चनपुरमा बालिका बलात्कारपछि भएको हत्या प्रकरण र सांसद निरुदेवी पालमाथि भएको धम्कीलागायतका विषय समेटेर जवाफ दिए ।
उनको जवाफ सकिएपछि कांग्रेसका सांसदहरुले असन्तुष्टि जनाउँदै प्रतिप्रश्न गर्न सभामुख कृष्णबहादुर महरासँग समय माग गरे । तर, सभामुख महराले प्रतिपक्षीलाई बेवास्ता गर्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई बोल्न समय दिए ।
मन्त्री ज्ञवालीले बोलेपछि कांग्रेसका सांसद डा. मिनेन्द्र रिजालले सभामुखसँग पटकपटक बोल्न समय माग गरिरहे । तर, सभामुख महराले सांसद रिजाललाई शुन्य र विशेष समयमा उठेका प्रश्नको मात्रै मन्त्रीले जवाफ दिएको भन्दै समय उपलब्ध गराउन मानेनन् ।
पुनः रिजालले प्रतिनिधी सभा नियामावली २१९ को ९२० अनुसार मन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर गर्न पाउनु पर्ने भन्दै सभामुखसँग अडान कसिरहे ।
महराले उनलाई नियमावालीको नियम १५ अनुसार मन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर गर्न पाउने व्यवस्था नभएको र अर्को बैठकमा बोल्ने समय उपलब्ध गराउने भन्दै बैठकअघि बढाइ नै रहे ।
कार्यसूचीअनुसार सभामुख महराले संसदीय समितिमा रहने सदस्यहरूको नाम पढेर सुनाए । त्यतिञ्जेल कांग्रेसका सांसदहरू उभिएर सभामुखले वाचन गरेका समितिमा रहने सदस्यहरुको नाम सुनिरहे ।
त्यसपछि पनि सांसद रिजालले सभामुखसँग प्रतिप्रश्न गर्न पाउनु पर्ने माग दोहोर्‍याइरहे । तर, सभामुख महराले समय उपलब्ध नगराई अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडालाई बीमासम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत गर्न समय दिए । यति भएपछि थप रुष्ट भएका कांग्रेसका सांसदहरु बैठक नै बहिस्कार गरेर बाहिरिए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल बाहिरिए पनि सभामुख महराले बैठकको काम कारबाही रोकेनन् । उनले गृहमन्त्री बादललाई अन्तराष्ट्रिय आतंकवाद अन्तरदेशीय संगठित अपराध र अवैध लागूऔषध कारोबारविरूद्ध सहयोगसम्बन्धी विमस्टेक महासन्धि विधेक प्रस्तुत गर्न समय दिए ।
सो विधेयक संसदमा दर्ता भएपछि महराले शुक्रबारसम्मका लागि प्रतिनिधी सभाको बैठक स्थगन भएको घोषणा गरे ।
संसदमा भएको यस्तो दुर्लभ घटनाका बारेमा सत्तापक्ष, प्रतिपक्षी र कानुनका जानकारको आ–आफ्नै धारणा छ ।